အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အပြုအမူများ (၂၀၀၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်ကိုယ်တိုင်
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ထိုင်ဝမ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူ (2005) မှ exposure
Doi: 10.1207 / s15506878jobem4902_5
အရှင်-hwei Lo & ဝေသို့ပွေးလေ၏
အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာဂျာနယ်, Volume ကို 49, ပြဿနာ 2, 2005 စာမကျြနှာ 221-237
FULL ဆန်းစစ်ချက် PDF ဖိုင်ရယူရန်
ဒီလေ့လာမှုကထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေမှထိတွေ့မှုနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူဆယ်ကျော်သက်များ၏အမူအကျင့်များအကြားဆက်ဆံရေးအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကို examine ။ ရလဒ်များနမူနာခန့် 38% ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအချို့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ကြောင်းပြသပါ။
ထို့ပြင်ဒီထိတွေ့မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုလိုကျပိုမိုလက်ခံမှုနှင့်လိင်အလိုလိုအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏ သာ. ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အရေးအပါဆုံး, ဒီထိတွေ့မှုကြောင့်ရိုးရာညစ်ညမ်း, ယေဘုယျမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ဒေသစစ်တမ်းများမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းလေ့လာသောအခါလိင်အလိုလိုသဘောထားများနှင့်အပြုအမူနှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ဆံရေးပြသခဲ့သည်။
Lo နှင့်ဝေအားဖြင့်ကောက်ယူတစ်ဦးက 2005 လေ့လာမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့် 2,001 ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်ကိုလက်မခံခြင်းနှင့်လိင်အလိုလိုအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမည်ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းညွှန်ပြ။
lo နှင့် 2005 ထိုင်ဝမ်ကျောင်းသားဝေရဲ့ (2,001) လေ့လာမှု မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုများနှင့်အိမ်မထောင်မီနှင့် extramarital လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆီသို့အပြုသဘောဆောင်သဘောထားများအကြားဆက်ဆံရေးသရုပ်ပြ.
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏သဘောထားများအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုဆန်းစစ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ Lo နှင့်ဝေ (2005) ကိုလေ့လာဆန်းစစ် hierarchical ဆုတ်ယုတ်ကိုအသုံးပြု အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းညစ်ညမ်းမီဒီယာအားလုံးအခြားပုံစံများထက်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်။
PSA - သင့်လက်တွဲဖော်သည် ညစ်ညမ်းဖြစ်စေသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုရှိနေပါက၊ ပြဿနာသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ ဦးနှောက်နှင့် သက်ဆိုင်သည်... t.co/H5LlvSu348
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ဘဝရဲ့ တခြားအချိန်တွေထက် ပိုအရေးကြီးတယ်။ ယခု ဤမီးဖိုထဲသို့ ထည့်ပါ... t.co/PZgLbkOE4X